people Nepal » किन पिउने ब्ल्याक टी ? यस्ता छन् फाइदाहरु ! किन पिउने ब्ल्याक टी ? यस्ता छन् फाइदाहरु ! – people Nepal
किन पिउने ब्ल्याक टी ? यस्ता छन् फाइदाहरु !
कालो चिया अर्थात् ‘ब्ल्याक टी’संसारभर नै उपभोग हुन्छ । कुनै देशमा चिनीजन्य गुलियो पदार्थ हालेर पिउने चलन छ भने कतै केही पनि नहाली सादा रुपमै पिइन्छ । चिनियाहरुले गुलियो पार्ने पदार्थ, मसला, चकलेट तथा जडिबुटी हालेर चिया पकाउछन् ।भारत, नेपाललगायतका देशमा चिनी राखिन्छ । केहीले भने अदुवा, कागती, तुल्सी राखेर चिया पिउछन् ।